Adore Cricket One-nil to the Aussies - umdlalo on
Kulungile ke masiqale obaluleke kakhulu, umzuzwana enokuthi ngokukhawuleza kulityalwa kumaphephandaba aqhelekileyo, kodwa kufuneka ibanjwe phezulu njengoko oko cricket konke malunga. Kwi 3rd isikhumbuzo kokufa Phillip Hughes, Captain Root wathabatha unikezelo ngokukhawuleza ngqo ecaleni isigcina yakhe. Yonke le ntetho phambi kokuba manqaku malunga "ngamakhondo ophela" Ngokukhawuleza wabonisa ukuba kanye - intetho, njengoko Aussies nangoko waya ukuqinisekisa Root kulungile. Amajelo ngamana uthando ukuzama ukutyhala soundbites, uze uzame ukuthetha ngaphambili imfazwe, kodwa xa kufikwa phantsi ishishini abadlali kufuneka imbeko kakhulu omnye komnye, yaye xa ngempela, kukubalela emfazweni, kwakungekho kokuthandabuza ukuqinisekisa umdlali wayefunda ok. Kwaba kuhle ukubona.
Kuthekani umphumo eNgilane, abanako ukuthatha naziphi positives kulo? Kakade akulungile ukuba ulahlekelwa 10 iiwikethi, kodwa kulula ukwenza bekwenza jonga kweli 4th kwamangeno nge isikora esisezantsi ukugxotha. Ukuba target abe 100-150 runs eziphezulu ange Australia waziva ingcinezelo Ibhodi kwaye umphumo kakuhle ukuba ohluke kakhulu. Abanye abahlalutyi sele bebuza indlela eNgilani uza kuthabatha 20 iiwikethi - kuhle bathatha 10 nje phezu 300 ngaphandle nayiphi na ingxaki kwamangeno yokuqala, ukuze mhlawumbi ezinye nkumbulo elide kancinci kufuneka. Isiphumo kubonakala ngokwenene indawo emva omabini amaqela ukuba batted kanye - umahluko ndoqo 1 ye 4 Abaqhokri iklasi ihlabathi wenza enkulu ezilikhulu, yaye ecaleni kwakhe waqhubeka ukuba uwine. Ukuba Ingcambu waba mnye ukwenza 150 kwamangeno yokuqala, kunye Smith kuphela 50, England wayeza ukuba bajonge abakhokela 200, indawo babeza phantse ngokuqinisekileyo uwine kuyo.
Okuninzi iindaba ezimnandi kukuba eNgilani ukhuphiswano kakuhle ukuba yokuqala 3 iintsuku ezinesiqingatha, nakuba yaphelelwa esiqala batters zabo phezulu Cook kunye Root. Abafana ezintsha wenza ngcono kunokuba abaninzi babemoyika, ne Stoneman, Vince and Malan bonke abadlula 50 kwamangeno yokuqala. Ezinye pundits wenza into enkulu ye-England 'umsila "ngokwenza nje ezimbalwa runs kwamangeno yokuqala kodwa Moeen wenza runs kuzo zombini kwamangeno, Broad wakwazi 20 nxamnye bowling fast bouncy (ngcono kunokuba wakwazi ukuba ngokuqhelekileyo kwiminyaka yakutshanje) kunye Bairstow wenza endilisekileyo 42 kwamangeno wesibini. Akukho mntu walikhangela-sisala okanye ukoyikiswa yi imeko abanye abadlali baye e kuthotho engaphambili phantsi.
Ngoko level izinto phezulu kwaye ugcine loo manqaku nokhuphiswano eNgilani kufuneka aphumelele uvavanyo yesibini Adelaide, njengoko benza yi-innings ku 2010. Phambili phezulu!